Myanmar monk caught with 4.6m methamphetamine pills | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeMyanmar monk caught with 4.6m methamphetamine pills
Myanmar monk caught with 4.6m methamphetamine pills
@ http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/myanmar-monk-caught-with-4-6m-methamphetamine-pills/3497136.html?cid=fbcna 06 Feb 2017
YANGON: A Buddhist monk in Myanmar has been caught hiding more than four million methamphetamine pills in his monastery, police said on Monday (Feb 6), followingarecord haul of stimulant seizures last year.
The meth pills are are hugely popular across Asia among everyone from wealthy clubbers to exhausted blue-collar employees working long shifts.
Drug prosecutions also jumped around 50 percent from 2015 to 13,500, which police said reflected the growth in the local drug trade.
In September state media reported that two men had been arrested after 6.2 million methamphetamine tablets were found in their car in Maungdaw.
Thiha Soe with Linn Thuta.
ဘုန်းကြီးကျောင်း ကျက်သရေဆောင်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ခဲယမ်းများ ဖမ်းမိ
မောင်တောမြို့နယ်ထဲမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ခဲယမ်းတချို့ မေယုစစ်ဆင်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။
ညနေ ၅ နာရီခန့်မှာ မောင်တောဘက်ကို မောင်းနှင်လာတဲ့ ကားတစီးကို ဗောဓိကုန်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ ရပ်တန့်စစ်ဆေးတဲ့အခါ ကားပေါ်မှာ ပီနံအိတ်နဲ့ထုပ်ထားတဲ့ WY စိတ်ကြွဆေးပြား ၄ သိန်းကျော်ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမော်တော်ယာဉ်မှာပါလာတဲ့ လိုက်ပါလာတဲ့ ဦးအာစာရကို စစ်ဆေး
မေးမြန်းချက်အရ နောက်ထပ် WY မူးယစ်ဆေးပြားတွေနဲ့ ခဲယမ်းတချို့ကို ရွှေဗဟိုဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရွှေဗဟိုဘုန်းကြီးကျောင်း အပေါ်ထပ် ကျက်သရေခန်း ခုတင်အောက်မှာ ဆာလာအိတ်အ၀ါရောင် ၃ အိတ်၊ အောက်ထပ်စတိုထဲက ဆာလာအိတ် ၅ အိတ်၊ ကျောင်းလှေကားအောက်က ဆာလာအိတ် ၁၁ အိတ်၊ စုစုပေါင်း ဆာလာအိတ် ၁၆ အိတ်ကို WY ဆေးပြားတွေထည့်ထားတာ တွေ့ရှိရပြီး ကျောင်းဆောင်ဘေးအခန်းထဲက ဗုံးသီး ၁ လုံး၊ နိုင်ငံခြားဖြစ် ၅.၅၆ ကျည် ၄၀ တောင့်၊ ကပစထုတ် ၅.၅၆ ကျည် ၁၅ တောင့်နဲ့ ၇.၆၂ ကျည် ၃၉ တောင့်တို့ကိုပါ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ဆေးပြား
အရေအတွက်ဟာ ၄၂ သိန်း၊ ၂ သောင်းကျော်ရှိ ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ဗဟိုကျောင်းဆရာတော် ဦးအာစာရကို မူးယစ်နဲ့ လက်နက်ဥပဒေတွေအရ အမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီး စစ်ဆေး
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းဖို့အတွက် မေယုစစ်ဆင်ရေးကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့က စတင်ဆောင်ရွက်နေတာပါ။ ဒီစစ်ဆင်ရေးကို မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီး နှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး ရခိုင်ဒေသက မဟုတ်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလကို အထူးစစ်ဆင်ရေးလအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာပါ။
Credit: Tun Tint Aung
← ဂိုလ်ရှယ်လေး ပြောပြောနေတဲ့ ဇေယျာဖြိုးဆိုတာသူပါပဲဗျာ Ex-military and ex-Military, Intelligence officers and Ma Ba Tha Monks behind assassination of U Ko Ni and other mass murders
It is time for Daw Aung San Suu Kyi to ask help from UN Investigators to arrest Sr General Than Shwe, Min Aung Hlaing, USDP Generals, Wirathu, Thidagu and all the top Ma Ba Tha leaders →
One thought on “Myanmar monk caught with 4.6m methamphetamine pills”
မောင်းတောမြို့နယ် ရွှေဗဟိုကျောင်း ဆိုလားက … စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၄၁ သိန်းကျော် ( ၄၁၅ ကီလိုခန့် ) နဲ့
လက်နက်ခဲယမ်း ( ကျည်ဆန်တွေ ) တွေ ဖမ်းဆီးရမိတယ် ဆိုတော့ …
အိမ်း … ခက်လှပါလား …
အရင်ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုတာ … ဟိုလူကြီးတွေ အကာအကွယ်
ပေးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ လုပ်တယ် အောက်မေ့တာ
ဟိုအရင်က ၀ကခနဲ့ ဟိုပါတီက လူစွာလုပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီဒေါက်တာပဲ
လုပ်တယ် မှတ်နေတာ …
ခုခေတ်မတော့ ပြည်သူဒကာတော်များရဲ့ ဆွမ်းကိုစားပြီး
ပြည်သူကို ပြန်သတ်ဖို့ ကြံနေတဲ့ ရဟန်းတု ရဟန်းယောင်
ကိုယ်ကျိုးရှာသမားတွေ ဖြစ်နေပါပေါ့လား …
သာသနာအတွက် အင်မတန် အရှက်ရဖွယ် ဖြစ်တယ် …
ဒါမျိုးတွေကို အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ် အရေးယူကြစေချင်တယ် …
( ကျုပ်သာသနာ မဟုတ်ဘူး မပြောနဲ့ … စစ်မှန်တဲ့ ဘာသာတရား
တိုင်းကို လေးစားတန်ဖိုးထားတယ် … )
ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးနဲ့ လက်နက်ခဲယမ်း ဘာဆိုင်သလဲ ဗျာ …
အကြောင်းပြရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး …
ခက်တာက လူအလုပ်ကို ဘုန်းကြီးတွေက လုပ်နေတာ
သိပ်ခက်တာပဲ … အကြည်ညိုပျက်ပြန်တော့ ကိုယ်ကပဲ
မကောင်း ဖြစ်ရတယ် … အမှန်က လူထုက သင်္ကန်းကို
မငဲ့ဘဲ … တိတိကျကျ ဖော်ထုတ်ကြရမှာ ၀ိုင်းကျဉ် ကြရမှာ
ဒါမှသာ သာသနာရောင်ဝါ ထွန်းစေကြောင်း ဖြစ်လာမှာ
မဟုတ်ပါလား ဗျာ ….
( မော်လ၀ီဆဗ်တွေ မကောင်းရင် မကောင်းကြောင်း ရေးသလို
ဒီတခါ ရှင်တု ရှင်ယောင်တွေကို လူထုက ၀ိုင်းဝန်း ဖော်ထုတ်ကြဖို့
တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် … ဒါ ဓမ္မန္တရာယ်နော် … မပေါ့ကြနဲ့ )